ရေချိုးခန်းကိုရွေးချယ်တဲ့အခါပုံးပုံး, ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်သောရေချိုးခန်းအချည်းနှီးများ၏အစိုဓာတ်ကိုကာကွယ်နိုင်သောပြproblemနာကို ပိုမို၍ သုံးသပ်ပါမည်. Due toalarge amount of water used in the bathroom, ပတ်ဝန်းကျင်အလွန်စိုထိုင်းသောဖြစ်ပါတယ်. So how is the 48-inch bathroom cabinets with sink moistureproof? ဒီနေ့, asabathroom furniture manufacturer, FRANK သည်ရေချိုးခန်းမှန်ရှိသည့်ဗီရိုကိုအစိုဓာတ်ထိန်းနိုင်သောနည်းလမ်းများနှင့်မိတ်ဆက်ပေးချင်သည်.
The main source of moisture in the floor. The wall-hung and wall mounted bathroom cabinets solve the problem of moisture absorption at the bottom of the cabinet and successfully block 50% ရေချိုးခန်းကက်ဘိနက်အတွက်အစိုဓာတ်ထိုးဖောက်မှု၏. Bathroom corner cabinet wall mounted can not only avoid direct contact with the ground but also maximize the use of the upper bathroom space.
ရေချိုးခန်းကက်ဘိနက်သစ်သားကက်ဘိနက်ခြေထောက်ကိုအသုံးပြုသည်ဆိုပါက, က damp ရရန်လွယ်ကူသည်, နှင့်မသိစိတ်ကက်ဘိနက်ခန္ဓာကိုယ်မှအစိုဓာတ်ကို ဦး ဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်, အရာနောက်ဆုံးမှာတစ်ခုလုံးကက်ဘိနက်၏ပုံပျက်သော ဦး ဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်. ကက်ဘိနက်၏အောက်ခြေကက်ဘိနက်ကိုထောကျပံ့ဖို့ခြေထောက်ပစ္စည်းအဖြစ်သတ္တုကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုရင်, ပြproblemနာကိုကျွမ်းကျင်စွာဖြေရှင်းလိမ့်မည်. ဖြည့်စွက်ကာ, လူမီနီယံကက်ဘိနက်ခြေထောက်အလွန်အားကောင်းတဲ့ဖြစ်ကြသည်, သောအင်တုံ၏မိုးသည်းထန်စွာဖိအားကိုဆီးတားနိုင်. And the anti-rust characteristics of aluminum can ensure that the cabinet legs do not rust after contact with water.
တစ်ခုတည်းနစ်မြုပ်အနတ္တနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်အင်တုံကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံဖြစ်ပါတယ်, အသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေလည်းအတော်လေးမြင့်မားသည်. ရေဆေးရေ၏ရေထွက်ပိုက်သည်အောက်ခြေပြားကို ဖြတ်၍ မြေထဲသို့ဝင်သွားလိမ့်မည်. The condensed water in the basin will also take the opportunity to sneak into the cabinet bottom plate from the cutting edge of the plate so that the bathroom cabinet bottom plate is affected by moisture and deformation. ရေကူးကန်၏အောက်ခြေရှိပိုက်လိုင်း၏ထွက်ပေါက်တွင်ရေစိုခံနိုင်သောကြမ်းခင်းယိုစီးမှုတစ်ခုရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး, ကက်ဘိနက်၏သက်တမ်းကိုတိုးချဲ့နိုင်သည်.
ပုံမှန်ရေချိုးအတွေ့အကြုံအရသိရသည်, ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေချိုးခန်းရှိအင်တုံသို့မဟုတ် faucet သည်ပူသောလေနှင့်တွေ့သောအခါရေငုပ်လျှံနေသောရေအမြောက်အမြားထုတ်လုပ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရလိမ့်မည်။, which will flow into the bottom of the bathroom sink cabinets along with the table, ကက်ဘိနက်မှိုများနှင့်ပုံပျက်သောဖြစ်လာသည်. အကယ်၍ သင်သည်ရေစိုခံနိုင်သည့်လူမီနီယံသတ္တုပါး (သို့) ရာဘာပြားအလွှာတစ်ခုကိုကက်ဘိနက်၏အောက်ခြေတွင်ထည့်နိုင်သည်, ဒီပြproblemနာကိုသင်ဖြေရှင်းနိုင်တယ်, အစိုဓာတ်ကိုကာကွယ်နိုင်ပေမယ့်လည်းရေချိုးထုတ်ကုန်ကို fix နိုင်ပါတယ်.